Saddex arrimood oo Kenya ka hor istaagaya inay Xirto xeryaha qaxootiga | Dhacdo
Home Wararka Maanta Saddex arrimood oo Kenya ka hor istaagaya inay Xirto xeryaha qaxootiga
Horay ayay Kenya marar kala duwan u soo saartay qorshe ay ku xireyso xeryahaas oo dadka ku jira ay u badan yihiin qaxooti Soomaali ah. Dalalka kale ee qaxootigan ay kasoo kala jeedaan waxaa ka mid ah Suudaanta Koonfureed, Itoobiya iyo Burundi.
Amnesty ayaa sheegtay in ay rajeyneyso in Kenya ay aqbasho baaqa ay ugu jeedisay dib uga noqoshada go’aanka xiritaanka xeryaha.
Sidoo kale waxay hay’addu codsatay in dadka qaxootiga ah ee u qalma sharciga muwaadinnnimada Kenya in la siiyo dadka kalena ay waddamada caalamka ee soo galootiga qaabila la wareegaan.
“Dalalka quwadaha leh waxaan ka codsaneynaa in ay Kenya ku caawiyaan sii martigalinta qaxootiga, haddii ay suuragal tahayna waddamada sida Mareykanka iyo Ingiriiska in ay dadka dib u dajin u sameeyaan haddii ay awood u heli weyso Kenya,” ayuu yidhi Cabdullaahi.
Previous articleHormuud Salaam Foundation oo 400 haamood oo Oxygen ku wareejisay dowladda
Next articleBeesha Caalamka oo farriin u dirtay Madaxda Soomaalida